Kindle 5.4.2.1 — MYSTERY ZILLION
February 2014 in Daily Life
How can i use zawgyi font in my Kindle Ebook paperwhite 2nd generation? Please help me friend
February 2014 Administrators
connect PW/KT to computer per USB
on usb-drive create an empty/new file with name: USE_ALT_FONTS
create the folder: fonts
copy your font in regular, bold, italic, and bold-italic into newly created fonts/ folder
eject/disconnect PW/KT from USB ( unplug cable after ejecting )
restart PW/KT ( menu->settings, then menu->restart )
You can check with screen
ref : http://www.mobileread.com/forums/showpost.php?p=2353723&postcount=8
I was follow this link, but i didn`t get it. Thank for your help. I will try reset my PW.
I can`t used custom fonts on my Kindle PW . Please help me. firmware is 5.4.2.1.
USE_ALT_FONTS ခံပြီးထည့်တာက ဗားရှင်း ၅အောက်က ကိုင်ဒယ်​တွေမှာပဲ ရတယ်။ 5.xကစပှီး မရတော့ဘူး။
စမ်းကြည့်ချင်ရင် Notepad နဲ့ USE_ALT_FONTS ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင် လုပ်ရတယ်။ ပြီးရင် extension ဖြစ်တဲ့ .txt ကို ဖျက်လိုက် ။ အိပ်စတန်းရှင်းကို ဖျက်မှာလား မေးရင် အေး ဖျက်မယ်(yes)လို့ ပြောလိုက်။ fonts လို့ ရေးထားတဲ့ ဖိုဒါရယ် USE_ALT_FONTS ဆိုတဲ့ ဖိုင်ရယ်ကို Kindle ထဲ ကွန်ပျူတာက တဆင့် ထည့်လိုက်။
စမ်းခြင်တဲ့ ဖောင့်ကို fonts အောက်မှာ ထား။ ​သေချာတာကတော့ မြန်မာဖောင့်တွေ မရဘူး။
ဗားရှင်း 5.4ကစပြီး မြန်မာစာကို support လုပ်တယ်။ ယူနီကုဒ်ကတော့ တဝက်တပျက် အမှန်ပြတယ်။ ဖောင့်ပါတယ်။ရမ်းဒါးလုပ်တဲ့ စနစ်ပါတာကြောင့် မှန်တော့ မမှန်ဘူး။
ဇော်ဂျီကတော့ font embed လုပ်ရင် အမှန်ပေါ်တယ်။ ဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး။ ကျိုးတိုးကျဲတဲ။